दीपेन्द्रसिंह थापा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
दीपेन्द्रसिंह थापाका लेखहरु :
दीपेन्द्रसिंह थापा ४ श्रावण २०७६ शनिबार १९ मिनेट पाठ
छिनमै घाम, छिनमै बादल। कहिले कुहिरो र सिर्सिरे बतास। एकै छिनमा पानी नै बर्सिन पनि के बेर ! चिसो याममा बुरबुरती खस्ने हिउँको सौन्दर्य त अवर्णनीय छँदै छ। पहिलोचोटि शैलुङ पुग्दा मनमा लाग्यो, ‘सुन्दर चञ्चलतासहित प्रकृतिको उन्मत्त बैँस प्रदर्शित हुने कुनै दिव्य क्रीडास्थलमा पो छु कि म ?’ सय वटा थुम्काका लुङ शैलुङ, त्यो पनि मालाका लुङजस्तै लहरलहरमा मिलेका। कतै जोल्ठिएजस्ता, कतै अङ्कमाल गरेजस्ता र कतै आपसमा मिलेर टाँसिएजस्ता । अनेक बान्कीका थुम्काहरू। जता हे¥यो त्यतै कलात्मक परिदृश्य। हेरेर र घुमेर त, खै को पो अघाउला र यहाँ पुग्नेहरू जस्तो लाग्ने। मेरो मन पनि लुटपुटिनुसम्म लुटपुटिरह्यो। आँखाहरूले तनतनी सौन्दर्य पिई नै रहे, नथाकी।
दीपेन्द्रसिंह थापा ४ जेष्ठ २०७६ शनिबार १९ मिनेट पाठ
‘केटाकेटीको गोठालो लागेर आउँदै छु’, बाटोमा भेटिएका अर्को व्यक्तितिर आफ्नो बोली सम्प्रेषित गर्दै थिए एक शिक्षक।
दीपेन्द्रसिंह थापा १४ वैशाख २०७६ शनिबार १७ मिनेट पाठ
कञ्चन पानी कुलकुलाउँदै बग्ने पहाडी खोला कसलाई मन नपर्ला? प्रकृतिको सजीव बिम्ब हुन्छ त्यहाँ। निरन्तरताको प्रतीक हो खोला, र हो गतिशीलताको ध्वनि पनि। त्यसैले त खोलाको स्वच्छ पानी र बगिरहने बानी दुबै मन पर्छ मलाई पनि, अन्य प्रकृतिप्रेमीलाई जस्तै।
दीपेन्द्रसिंह थापा १६ चैत्र २०७५ शनिबार १८ मिनेट पाठ
दीपेन्द्रसिंह थापा १९ माघ २०७५ शनिबार २० मिनेट पाठ
दीपेन्द्रसिंह थापा २८ पुस २०७५ शनिबार १४ मिनेट पाठ
फूलको डोली पछ्याउँदा
समय र सम्भावना न स्थिर छ, न सीमित। हिँडिएका, भोगिएका बाटोका बाछिटा भने स्मृतिका अन्तरकुन्तरमा जम्मा भई बस्छन् र छचल्किन छाड्दैनन्। बेलाबखत सलबलाउँछन्, चलमलाउँछन् बितेका समयका छायाँहरू आफैँभित्र। झन्डै तीन दशकअघिको एउटा जात्रामय स्केच ताजै छ मेरो मनमा। यति ताजा कि न उडेको छ रङ त्यसको, न त धमिलिएका छन् रेखाहरू नै।
दीपेन्द्रसिंह थापा २२ मंसिर २०७५ शनिबार १६ मिनेट पाठ
कुरैकुरामा कहिलेकाहीँ कसैले प्याच्च बोलेको सुन्छु, ‘सङ्गत गुनाको फल’ । लाग्छ, सङ्गतलाई सामान्य ठान्न नहुने रहेछ । सङ्गतको प्रभाव कुनै न कुनै रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ मान्छेमा । अझ असरदार देखिन्छ मान्छेका व्यवहारका मोडहरूमा।
दीपेन्द्रसिंह थापा १७ कार्तिक २०७५ शनिबार १८ मिनेट पाठ
प्रत्येक वर्ष आवृत्त हुन्छ शारदीय सौन्दर्य । छरिन्छ मनमनमा समयको एकखाले आकर्षण । प्रकृतिको यही अनुक्रमसँगै जोडिएर आउँछ दसैँ । नेपाली मनका लागि सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा छुट्टै आकर्षण छ दसैँको । ग्रामीण परिवेशको दसैँ बिम्ब अझै उल्लेख्य लाग्छ मलाई ।
दीपेन्द्रसिंह थापा २० आश्विन २०७५ शनिबार १७ मिनेट पाठ
जीवन प्रकृतिको अंश । प्रकृति जनित विशिष्टताको गठजोडबाट उब्जिनु र प्रकृतिकै विशालतामा विलय भएर एक दिन सिद्धिनु जीवनको विशेषता । लाग्छ, प्रकृतिको सामीप्यमा रम्नेहरूको जीवन जति शान्त, सुशील र ऊर्जाशील हुन्छ, त्यति कृत्रिमताका पछि कुद्नेहरूको हुन्न ।
दीपेन्द्रसिंह थापा ६ आश्विन २०७५ शनिबार २० मिनेट पाठ
एउटा बिम्ब नै बनिसकेको छ झोराहाट गाउँ, उर्वर सांस्कृतिक चेतना छ त्यहाँ । गाउँमै नाटकघर स्थापना गरिएको छ । नाटक र साहित्यका अन्य विधामा समेत निरन्तर जीवन्त गतिविधि गर्दै आएको छ त्यहाँको ‘झोराहाट नाट्य केन्द्र’ले ।
दीपेन्द्रसिंह थापा २३ भाद्र २०७५ शनिबार १९ मिनेट पाठ
मृत्यु सबैभन्दा अप्रिय तर अवश्यम्भावी पाटो हो जीवनको । हो, सबैको जीवनको अन्त्य दुःखद नै हुन्छ । त्यसमा पनि आफूले आदर्श ठानेका, असल मानेका पात्रलाई असमयमै गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो होला ?
दीपेन्द्रसिंह थापा २ भाद्र २०७५ शनिबार १८ मिनेट पाठ
दीपेन्द्रसिंह थापा १९ श्रावण २०७५ शनिबार १७ मिनेट पाठ
दीपेन्द्रसिंह थापा १९ जेष्ठ २०७५ शनिबार २५ मिनेट पाठ
दीपेन्द्रसिंह थापाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्